ဆက်သွယ်ရန် -, Ltd. Lom Glassworks Co. ,
အလှကုန် Glass ကို Bottle သ
ပျံ့ Bottle သ
ရေမွှေး Bottle သ
ဆေးဝါး Glass ကို
အရေပြားစောင့်ရှောက် Glass ကို
လက်သည်းပိုလန် Bottle သပြီးတော့အလိပ်တွင်ရေနံ Bottle သ
Drinkware ပြီးတော့ Barware
စားနပ်ရိက္ခာ Glass ကိုထိုအ Beverage Bottle သ
Ltd. , Lom Glassworks Co. ,
201-203 Gulou စက်မှုပန်းခြံ, Jiangsu, တရုတ်
စနေနေ့, တနင်္ဂနွေ: ပိတ်ထားသော
ဖန်ပုလင်း-30ml 50 များအတွက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု ...
Glass ကိုပုလင်းအလှကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးပစ္စည်းများအတွက်အဓိကအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ဟာအဓိကအားဖြင့်အသားအရေပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးထုတ်ကုန် (လိမ်းဆေး, လိမ်း), ရေမွှေး, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများနှင့်လက်သည်းအရောင်တင်အတွက်အသုံးပြုကြသည်။ အဆိုပါစွမ်းရည်သေးငယ်သည်, ထိုစွမ်းရည် la ...
အကောင်းဆုံးသောကြာနေ့အပေးအယူ: Hydroflasks, အမဲသား ther ...
"TGIF!", မင်းသမီးနှင့်လူကြီးလူကောင်းယခုငါနှင့်အတူအပြောဇွန်လ၏ဤနောက်ဆုံးအပတ်ကကျနော်တို့ပိုမိုနီးကပ်စွာနှစ်ခုအမျိုးသားရေးအားလပ်ရက်-လာမည့်သီတင်းပတ်အတွင်းဖြစ်သည့်သင်တန်း၏ဇူလိုင်လ၏စတုတ္ထ, တစ်ဦးမှထိုမျှလောက်ပါပဲပေးသောနည်းလမ်းဖြင့်ပျံသန်းခဲ့သည်။ ..
အံ့သြစရာ es ကနေအကျိုးခံစားရဖို့ကြည်နူးဖွယ်နည်းလမ်းများ ...
သငျသညျမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများသင်၏စုဆောင်းမှုတို့အတွက်လိုအပ်သောသောအကြောင်းကိုရှာဖွေရေးအပေါ်ပါပြီလျှင်သင်ရုံအိမ်ပြန်ကုစား Rosemary တစ်အိမ်ရှင်အဘို့သင့်သစ်ကိုအကြိုက်ဆုံးရေနံရှာတွေ့စေခြင်းငှါထို Med တစ်မွှေးအမြဲစိမ်းအပင်ဇာတိဖြစ်ပါတယ် ...
အဘယ်ကြောင့် Choose Lom
အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလောက်များစွာသောပညာရှင်များမိမိတို့၏ပေးသွင်းအဖြစ် Lom ကိုရှေးခယျြပါသနည်း အဖြေရိုးရှင်းသောဖြစ်ပါတယ် ... ယုံကြည်မှု။ Lom ဖန်ကွန်တိန်နာဘီလျံအစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းပေါ်နှင့်မရေမတွက်နဲ့အခြားဆေးဘက်ဆိုင်ရာ enviroments မှာ, အပင်အတွက်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်သွားပါ။ th ...
နေရပ်လိပ်စာ: 201-203 Gulou စက်မှုပန်းခြံ, Jiangsu, တရုတ်
E-mail ကို: info@lomglassworks.com
© 2019 Lom GLASSWORKS All Rights Reserved ။ Products Guide - Featured Products - Hot Tags - Sitemap.xml - AMP Mobile